कल्पनामा बिरामी जाँच्नुपर्दा । कार्यस्थलको सहजताले कार्यसम्पादन दुरुस्त हुन्छ भन्ने कुरा पक्कै हो । त्यसैले त कार्यस्थलमा भौतिक पुर्वाधारको निकै महत्व हुन्छ । कार्यालयको घडीले १० बजाउँदै छ । आनन्दसँग बिरामी हेर्न पाउँदा निकै खुसी पनि लाग्ने गर्छ । बाटोमा धुलो र धुवाँमा चरम छाला चरचराउने गर्मीमा हिँडेर ओ पि डि कक्षमा छिर्दा चिसो वातावरणले गर्दा ताजा महसुस हुन्छ । दिमाग चल्न पनि बस्ने र काम गर्ने वातावरण सहज हुनुपर्ने हुन्छ । हुप्प गर्मीबाट ओ पि डि कक्षमा आउँदा चिसो महसुस हुँदा बिरामी पनि आधा सन्चो भएको महसुस गर्छन् । धेरै बेर बसौं जस्तो लाग्ने रहेछ सायद। बसेको टुलबाट उठ्नै ढिलो गर्छन् । किस्तावन्दीमा समस्या सुनाउने गर्छन् । टिकेट पनि एक जना चिकित्सकलाई ५० भन्दा बढी नकाटेको खबर आउँछ काउन्टरबाट । आरामले नहतारिकन बिरामी हेर्न पाइयो भनेर मजा आउँछ । कति टाढाबाट आएका बिरामीलाई नाडी छामेर फटाफट हेरेर औषधिमात्रै लेखेर पठाउन नपरेको दिन कतै अन्याय गरेको महसुस हुँदैन । ओ पि डि भित्रको सरसफाइ देख्दा मन पनि हरर हुन्छ । टेबुल पनि एकदम स्थिर । हात अड्याउँदा, लेख्दा पनि नहल्लिने । सफा हरियो रङको
चम्चाले पस्किएको तरकारी । बिहानैदेखि दिनभर लेखेको लेख्यै छु । पसिनाले शरीर निथ्रुक्क भिजाउँछ । सर्टले कुनै अज्ञात देशको नक्सा देखाउने गरी शरीरमा टाँस्सिएर आकार बनाउँछ । सायद प्रशासनिक उदासीपन र अनुदारताको नक्सा होला । त्यो पंखाको हावा त कता कता । एकै पटक धेरै जना बिरामीको भिड । कसैलाई रिपोर्ट देखाउने चटारो । कसैलाई औषधि लेखाउने चटारो । मलाई भने पानी पिउन र पसिना पुछ््न मै चटारो । पिसाबबाट जाने पानी सबै पसिनाबाट । हल्का झिँजो पनि लागिरहेको हुन्छ । गर्मी , भिड , लेखनदासको कार्यले । कतै रुखो बोलिएछ भने यहि लेखमार्फत क्षमाको आशा । आजसम्म त कसैले बुझेनन् ," बालेन"ले जितेछन् भने उनका योजनामा अरु कार्यालयबाहेक ए सी सहितको ओ पि डि कक्ष पनि चाहिन्छ है भनेर चिठी लेख्ने मन हुन्छ ! सधैं घरमा खाना खाँदा कहिलेकाहीँ बजारतिरका भान्साघरहरुमा खाना खाने चलनको तीव्रता नेपालमा देखिएको छ । दिनभर पट्यारलाग्दो पसिनाले रुझाएको कार्यबाट उम्किएर साँझपख एउटा रेस्टुरेन्ट जाने योजना बन्छ । टिममा धेरैजनालाई भात प्रिय लाग्ने हुनाले खाना खाने हेतुले भान्साघरतिर लाग्छौँ । त्यहाँ पुगेपछि सुरु हुन्छ भु
त्यो बिहानी कती बेला आउला ? देश पुरै चुनावमय भएको छ । समाचारमा चुनावी सरगर्मीले तताएर हेडलाइन्स जति चुनाव केन्द्रित छन्। भोट के होला कसरी तान्ने होला भन्दै झन्डाहरु खिचातानी गरिरहेका छन् । मौन अवधी सुरु भइसकेको छ । मौन रहँदा जसरी विचारहरुका ज्वारभाटा आउँछन् त्यसरी नै चुनाव जित्ने मौन तिक् डमहरुको बाढी पनि आउँदा हुन् । उम्मेदवारले नै जानुन् । मलाई त केवल बिहान कहिले हुन्छ भन्ने चिन्ता छ । त्यसैको पिरलो छ । रात नै कति लामो भएको महसुस हुन्छ । ( तत्व ज्ञान : समय वास्तवमै सापेक्ष कुरा रहेछ । ) एक २० वर्षिय महिला बच्चा जन्मेको ४ दिनमा स्या स्यात गर्दै एमर्जेन्सिमा आएकी छन् । उनको स्वासदर नै ५० नाघेको छ । निकै अप्ठेरो महसुस भएको देखिन्छ । स्वा ..स्वा ..स्वा...स्वा.. एक पटक ५० पटक श्वास फेरेर विचार गर्नुहोस् त !! कति गार्हो हुन्छ । कोभिडलाई जितेकाहरुले त कटु अनुभव नबिर्सेका होलान् । तर बिरामी नभएको व्यक्तिलाई मैले भनेका कुरा शब्दका अतिरन्जना मात्रै लाग्न सक्छ । छातीको एक्स रेमा हेर्दा उनको मुटु सुन्नेको छ । यो डेलिभरी पश्चात् देखिने मुटुको समस्या हो जसमा मुटुले पम्प गर्न सक्दैन । फोक्स
हुन त गर्भअवस्था र सुत्केरी हेर्न नपर्ने भएको ४ वर्ष बितिसकेछ । तर जिल्ला अस्पतालहरुमा काम गर्दाको अनुभवहरु भने समाचार आदिमा कुरा सुन्दा बेला बेला सम्झना हुने गर्छ । राष्ट्रले जति फड्को मारेको गफ दिए पनि कुनाकुनामा चेतनाको दियो अझै बल्न सकेको छैन । चेतनामा फड्को नमारेसम्म सबै कार्यक्रमहरु विफल हुने गर्छन् । डोल्पाको दुनै बजार डोल्पाको सदरमुकाम हो । त्यहाँ एउटा जिल्ला अस्पताल रहेको छ । ढुङा र सिमेन्टले बनेको अस्पताल । वरपरका गाउँहरु जाने बाटो कच्ची नै छन् । कति गाउँसम्म एम्बुलेन्स आदि केहि पनि जाँदैनन् । विजुली बत्ती छ । तर कयौ पटक टर्च बालेर उपचार गर्नुपर्छ । किनभने बत्ती गएपछी फेरि आउन धेरै दिन लाग्छ । अस्पतालको जेनेरेटर बिग्रेको मर्मत गर्न प्रशासनिक झन्झटले रोकिरहन्छ । जनसंख्या नै पातलो हुनाले विरामी कम आउँछन । तर जटिल आउने गर्छन् । सानातिना समस्या त मान्छेले यत्तिकै पचाउने बानी परेको जो छ त्यहाँ ! त्यहाँको विषेशता के छ भन्दा बिरामी आउँदा शरीरको रोग मात्रै लिएर आउँदैनन्। साथमा सामाजिक अन्धविश्वासको रोग पनि लिएर आउने गर्छन् । यस्तै दुख सुखका विचमा सेवा दिने क्रममा केहो समय पहिले
निर्धक्क जीवन सबैको चाहना हो । न कसैको डर न कसैको छत्रछायामा । न कसैले केही गर्ला भन्ने चिन्ता । यस्तो निश्फिक्री जीवन जिउने रहर सबैलाई हुन्छ होला । तर यथार्थ त्यति सजिलो हुँदैन । धन भए धन व्यवस्थापनको चिन्ता । धन नभए धन कमाउने चिन्ता । निर्धक्क त मनुष्य कहिल्यै हुन नसक्ने रहेछ । सबैभन्दा ठूलो लगानी भनेको खुसी हो । हरेक कार्यमा खुसी लगानी गर्न सके जीवन सदाबहार मधुवन हुन्छ । संसारमा भुल्न सबैको आफ्नो आफ्नो पेशा हुन्छ । अस्पतालको काम सकेर घर फर्किँदा र काममा बिहान अस्पताल जाँदा बाटोमा अनेक दृश्य देख्न सकिन्छ । गगनचुम्वी आकर्षक होटेलका अगाडिका बाटोमा कुदेका सिलिक्क परेका चहकिला गाडीहरुदेखि सडक छेउमा आगो बालेर मकै पोलिरहेका दृश्यसम्म देख्न सकिन्छ । बाटोमा हिँडिरहेका कुकुरहरुको रासलीलादेखि चराहरुको आहार जुटाइरहँदाको सजगता सबै देख्न सकिन्छ । समय एउटै हो । तर घटित घटना परिघटना त्यो समयका जीवन्त पात्रहरुको अनुभवमा फरक । त्यो सडकामा यात्रा गरेका र सडक छेउमा स्थिर सबै व्यक्तिहरु आफ्नो मन भित्र एउटा अनुभूति गरिरहेका हुन्छन् सायद । कसैले गाडी कति बेला आउँछ भनेर कुरिरहेका हुन्छन् । कसैलाई ट्र
आकस्मिक घटना बाहेक स- साना स्वास्थ्यका समस्याहरुका निदान तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा पाइला विरलै टेकिन्छन् । स्वास्थ्यका आकस्मिक समस्याहरुमा अस्पताल अवस्य खोजिन्छ । तर सामन्य समस्याहरुलाई अस्पताल खोज्न व्यस्तता, अर्थ अभाव , व्यक्तिगत अरुचि आदिलाई दोष दिइन्छ । दीर्घकालीन सुषुप्त रोगहरु छिप्पिँदै जान्छन् । किनभने ती रोगहरुको कि लक्षण नै हुँदैनन् र लक्षण देखिएमा धेरैलाई सहन गर्न ठूलो कुरा नहुने रहेछ । स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच सहज भएपनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच भने सहज नहुन सक्छ । आर्थिक विपन्नताले गर्दा सानातिना समस्याहरु सजिलै पचाउने बानी नै बनेको हुन्छ । त्यस्ता छिप्पिएका रोगहरु हेर्ने बानी परिसकेको छ । एउटा प्रश्न भने सधैं उब्जन्छ " यति छिप्पिएको रोग किन समाजमा व्याप्त छ त ? " कुनै कुनै दिन ओ पि डि पट्यार लाग्दो नै हुन्छ । बिरामीको भिडभाड सदैव । त्यसमाथि मन चङ्गा नहुने ओ पि डिको व्यवस्थापन । ओ पि डिका सामानहरु व्यवस्थित देखिन्नन्। हल्लिने टेबुल स्थिर गर्न टेबुलका खुट्टामा कागजका टुक्रा राख्न पर्छ । गर्मीले सताउँदा पसिना सुकाउन ओ पि डि टिकेटको सहायता लिन पर्छ ।
स्वास्थ्य समस्या र भ्रमहरु । स्वास्थ्य चेतना समाजको दर्पण हो, राज्यको सफलताको सुचक हो । स्वास्थ्य सम्बन्धी सहि विचार र चेतनाले स्वास्थ्य समस्याको निराकरण गर्न उल्लेखनीय भुमिका निर्वाह गर्छ । भ्रमको खेतीले रोग छिप्पिने, ढिला उपचार हुने र आर्थिक भार बढ्ने हुनाले केही स्वास्थ्यका समस्या र सो सम्बन्धी हाम्रो समाजमा व्याप्त भ्रमहरुलाई चिर्ने प्रयास गर्नु आवस्यकता हो । के मोटोपन रोग हो त ? मोटोपन एक्काइसौं शताब्दिको एउटा महामारीजस्तै हो । " कस्तो खाइलाग्दो बच्चा रहेछ । "हाकिमजस्तै देखिएछ " " पेट नलागे कहाँ पत्याउँछन् त !" यस्ता वाक्यहरुले मोटोपनालाई प्रतिष्ठित बनाउने गरेको पाइन्छ । मोटोपन कुनै प्रतिष्ठाको विषय हैन । भुडीको आकार कुनै व्यक्तित्वको चिनारी हुन सक्दैन । यो एउटा समस्या हो । अझै स्पष्ट भन्नुपर्दा समस्याको जालो निम्त्याउने एउटा प्रमुख कारक तत्व हो । मोटोघाटो बच्चा देखेपछि हुरुक्कै हुने र ठिक्कको ज्यानमा निराश हुने अभिवावकको सोचाइले खानपिनको अनुशासन बिग्रेको छ । रोग लाग्नुभन्दा पहिले नै रोकथाम गर्ने कार्यलाई Primary Prevention भनिन्छ भने रोग लाग्न सक्